Ngwa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser na ụlọ ọrụ ndị na-eweta ihe ọkụkụ Ouzhan
Jiri akwa laser dị elu na-enwupụta ihe a ga-ebipụ, nke mere na ihe a na-eme ngwa ngwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ma na-ekpochapụ oghere. Ka osisi ahụ na-agagharị na ngwongwo ahụ, oghere ndị ahụ na-aga n'ihu na-etolite slits nwere oke warara (dịka 0.1 mm). Mechaa ịchacha ihe.
Mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ usoro-omenala nkenke mpempe akwụkwọ metal akụkụ nhazi
Ouzhan na-enye gị ngwa ngwa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser: aerospace, ụgbọ mmiri, akụrụngwa akụrụngwa, igwe ziri ezi, akụrụngwa nchekwa gburugburu ebe obibi, akụrụngwa ahụike, akụrụngwa ahụike, arịa ụlọ na ngwa ụlọ, kichin, ngwa elektrọnik, oriọna na oriọna, ntanye, ọrụ aka ígwè, aluminom Smallpox, mgbidi mgbochi aluminom, ụlọ ọrụ eletriki, ụlọ ọrụ ụgbọala, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, nhazi akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Igwe ọkụ laser nwere ike ịhazi: carbon steel, steel steel, silicon steel, steel steel, alloy steel, manganese alloy, titanium alloy, aluminom, alloy aluminum, aluminum plate, galvanized plate, electrolytic plate, pickling plate, copper and other materials.
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser
- Contactless nhazi
- Obere deformation nke warara slits
- Oke agba dị ọcha
- Nnukwu ume ike
- Dị ọcha, nchebe na mmetọ-n'efu
Ouzhan OEM ahaziri mpempe akwụkwọ metal laser ịcha ọrụ-China Shanghai mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, elu-nkenke mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ akụkụ na mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà nwere ike esichara. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Ndị ọrụ ọrụ aka anyị siri ike na ọkachamara na njikwa na arụmọrụ arụmọrụ nwere ike hụ na nrụpụta zuru oke nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ a na-enye na-agbaso ụkpụrụ dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ na laser ọnwụ ngwaahịa ka anyị kpọrọ ahịa.
Uru nke mpempe akwụkwọ laser ịcha
⑴ N'iji sistemụ laser dị atọ ma ọ bụ ịhazi robot ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji belata akụkụ oghere gbasara ohere, mepee ngwanrọ ngwanrọ nke atọ iji mee ka usoro ahụ gaa site na ịbịaru na ịkpụ akụkụ.
A-improve Iji meziwanye arụmọrụ mmepụta, nyocha ma mepụta sistemụ ọnwụ pụrụ iche dị iche iche, sistemụ na-ebufe ihe, sistemụ draịva, yana ọsọ ọsọ nke usoro mbelata karịrị 100m / min.
A-Iji gbasaa ngwa nke injinia injinia, ụlọ ọrụ na-arụ ụgbọ mmiri, wdg, ọkpụrụkpụ nke ịkpụ ala carbon dị elu gafere 30mm, a na-akwụkwa anya pụrụ iche na nyocha na usoro teknụzụ nke ịkpụ obere carbon nchara na nitrogen iji meziwanye ọnwụ nke ịcha oke efere. Ya mere, ịgbasa ụlọ ọrụ ngwa ọrụ nke ịkụcha laser CO2 na China na idozi ụfọdụ nsogbu ọrụ aka na ngwa ọhụrụ ka bụ isiokwu dị mkpa maka ndị injinia na ndị ọrụ ntanetị.
Gịnị bụ ngwa nke mpempe akwụkwọ laser ọnwụ
–Metal ọnwụ: Laser ọnwụ nwere ike inwe Cleaner, mụrụmụrụ na tighter ọnwụ karịa n'ibu nhazi. Dị ka ịkwa igwe, enwere ike ịhazi ya ma duzie ya na kọmpụta, nke pụtara na igwe mkpochapu laser nwere ike imepụta ọtụtụ akụkụ igwe maka akpaghị aka maka ụlọ ọrụ dịka ụgbọ ala na kọmpụta.
–Reflectivelective: Igwe enwupụtara agaghị emebi eriri anya. Mkpụrụ dị ka aluminom, ọlaọcha, ọla kọpa, na ọlaedo na-egosipụtacha ihe niile dịkwa mkpa na nrụpụta ụgbọ ala na nke semiconductor.
–Medical Science: Ichapu laser na-arụkwa ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụike. Na ụlọ ọrụ ahụike, oke nkenke dị oke mkpa na ịnabataghị ikike dị ezigbo mkpa. N'ihi ọchịchọ ụlọ ọrụ ahụike na-achọ maka imepụta nnukwu olu, teknụzụ a na-egbo mkpa ha n'ihi na ọ nwere ike ịmeghachi atụmatụ, n'ụzọ ziri ezi na ngwa ngwa.
Ọtụtụ ụdị ngwaọrụ ahụike nwere mmalite ha na laser ọnwụ, site na mkpụrụ obi na orthopedic ngwaọrụ na akụkụ ịwa ahụ. Site na igbutu laser, enwere ike ịmepụta ngwaọrụ ndị a na ọsọ ọsọ na-enweghị ịchụ àjà ziri ezi.
- All nkenke mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ bụ isiokwu nke nlezianya àgwà nnyocha.
- Dịka eserese ma ọ bụ ihe nlele maka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser.
Nke gara aga: OEM mpempe akwụkwọ metal ekwe akụkụ
Osote: Omenala mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ laser
Ibe ya bụrụ akụkụ carbon nchara
Ahaziri igwe anaghị agba nchara igwe akụkụ proces ...